Classic Editor – Tafatiraha Qadiimiga – Kaabaha WordPress | WordPress.org Soomaali
Classic Editor – Tafatiraha Qadiimiga
Tifatiraha Qadiimiga waa kaabe rasmi ah oo ay hagaajiyeen kooxda WordPress oo soo celisa tifaftirihii hore ee WordPress (“qadiimi”) iyo shaashadda “Faafinta Qormada”. Waxay suurtogal ka dhigaysaa in la isticmaalo Kaabayaal fidinaya shaashaddaas, ku dar sanduuqyada Meta-qadiimiga ah, ama haddii kale ku tiirso tifaftirihi hore.
Tifatiraha Qadiimiga waa kaabe WordPress oo rasmi ah, waxaana si buuxda loo taageeri doonaa loona hagaajin doonaa ilaa ugu yaraan 2022, ama ilaa inta loo baahan yahay.
Ilbidhigsi gudaheed, kaabahani wuxuu ku darayaa waxyaabaha soo socda:
Maamulayaashu waxay u dooran karaan tifatiraha gabbaadka ah dhammaan adeegsadayaasha.
Maamulayaashu waxay u oggolaan karaan adeegsadayaasha inay beddelaan tifaftirehooda gabbaadka ah.
Marka la oggolaado, adeegsadayaashu waxay dooran karaan tifatiraha ay u adeegsan doonaan qorma kasta.
Qorma kasta waxay ku furmaysaa tifaftirihii ugu dambeeyay ee la adeegsaday iyadoon loo eegaynin cidda tafatirtay. Tani waxay muhiim u tahay joogtaynta waayo-aragnimo joogto ah marka la tafatirayo dhigaal.
Intaa waxaa dheer, kaabaha Tafatiraha Qadiimiga waxaa ku jira dhowr shaandhooyin oo u oggolaanaya kaabayaasha kale inay xakameeyaan dejimaha, iyo xulashada tifatiridi qorma kasta iyo nooc kasta oo qormo.
Gabbaad ahaan, kaabahani wuxuu qarinayaa dhammaan shaqooyinka laga heli karo tifatiraha xayndaabka cusub (“Gutenberg”).
Dejinta maamulaha barta ee Dejinta -> Shaashadda qorista.
Dejinta adeegsadaha ee shaashadda Brofaylka. Wuxuu muuqan doonaa marka adeegsadayaasha loo oggolaado inay beddelaan tafatireyaasha.
"Linkiyada falka" si loo doorto tifatire kale. Wuxuu muuqan doonaa marka adeegsadayaasha loo oggolaado inay beddelaan tafatireyaasha.
Linki aad ugu beddesho tafatiraha xayndaabka intaad tafatir ku sameyneyso qormo adigoo adeegsanaya tafatiraha qadiimiga. Wuxuu muuqan doonaa marka adeegsadayaasha loo oggolaado inay beddelaan tafatireyaasha.
Linki aad ugu beddesho tafatiraha qadiimiga intaad tafatir ku sameyneyso qormo adigoo adeegsanaya tafatiraha xayndaabka. Wuxuu muuqan doonaa marka adeegsadayaasha loo oggolaado inay beddelaan tafatireyaasha.
Dejinta shabakadda si aad u xulato tifaftiraha gabbaadka ah ee shabakadda oo u oggolow maamulayaasha barta inay beddelaan.
Linkiga "U beddel tafatiraha qadiimiga"
Dejinta gabbaadka ah
Markii la hawlgeliyo kaabahan wuxuu soo celin doonaa tifaftirihii hore ee WordPress (“qadiimiga”) wuxuuna qarin doonaa tifaftiraha xannibaadda ee cusub (“Gutenberg”).
Dejintan waxaa laga beddeli karaa Dejinta = > Shaashadda qorista.
Dejinta gabbaadka ah ee rakibidda shabakadda
Waxaa jira laba xulasho:
Marka shabakaddu shaqeynayso, xayndaabkani wuxuu u dejin doonaa tifaftiraha qadiimiga si asal ahaan ah wuxuuna ka horjoogsan doonaa maamulayaasha barta iyo adeegsadayaasha inay beddelaan tifaftireyaasha.
Dejintan waa la bedeli karayaa iyo tifaftiraha shabakadda guud ee asalka ahna waxaa laga dooran karaa shaashadda Dejinta Shabakadda.
Marka aan shabakaddu shaqeynayn, maamule bar kasta wuxuu awoodi doonaa inuu hawgeliyo kaabaha oo uu doorto xulantiyada adeegsadayaashooda.
Ma heli karo linkiga “U beddel tafatiraha qadiimiga”
Taxmada tafatiraha xayndaabka guud dhexdeeda, arag tan sawir-shaashad.
Alex Walia 28 Juunyo, 2022
Marek 24 Juunyo, 2022
iacseo 18 Juunyo, 2022
Dave Loodts 17 Juunyo, 2022
romc357 16 Juunyo, 2022
wpuserisoc 12 Juunyo, 2022
Akhri dhammaan 1,072 dibu-eegis
“Classic Editor – Tafatiraha Qadiimiga” waa softiweer il furan. Dadka soo socda ayaa wax ku biiriyay kaabahan.
“Classic Editor – Tafatiraha Qadiimiga” waxaa lagu tarjumay 68 luqadood. Way ku mahadsan yihiin turjumaannada ka-qaybqaadashadooda.
Ku tarjun “Classic Editor – Tafatiraha Qadiimiga” luqaddaada.
Cillad la hagaajiyay oo horjoogsanaysay keydinta tafatirihii ugu dambeeyay ee la adeegsaday.
Digniin ayaa laga hagaajiyay tafatiraha xayndaabka oo ku salaysan shaashada kalkaaliyaha.
Cillad la hagaajiyay ee shaandhayn duugoobay.
Waa loo cusbooneysiiyay WordPress 5.5.
Waxaa la hagaajiyay arrimo yaryar oo la xiriira wicitaannada shaqooyinka gaboobay, diiwaangelin la’aanta saarista jillaabka, iyo xaraynta xargaha qaarkood.
Waxaa loo cusbooneysiiyay WordPress 5.2 iyo Gutenberg 5.3.
Waxaa la fiicneeyay oo la hagaajiyay caqligalka ah “qormooyinka furan ee tafatirihii ugu dambeeyay ee loo adeegsaday in wax laga beddelo”.
Waxaa la hagaajiyay ku daridda xaaladda qormada si si fudud looga heli karo kaabayaasha kale.
Waxaa xadeynta laga saaray marka rakibida shabakadaha si loo hawlgeliyo shabakadda kaliya.
Waxaa taageero lagu daray maamulayaasha shabakadda si ay u doortaan tafatiraha shabakadda gabbaadka ah.
Waxaa la hagaajiyay linkiga dejinta ee digniinta shabakadda kasoo muuqda shaashadda.
Waxaa si haboon loogu daray tiraabta taxmada “U beddel tafatiraha qadiimiga” ee taxmada xayndaabka tafatiraha.
Waxaa la hagaajiyay ka saarida gabalka jaafka wadidda ee “Isku day Gutenberg”.
Waxaa la hagaajiyay xaaladda muujinta ogeysiiska dibu-hagaajinta shaashadda “Maxaa Cusub”. Waxaa la muujiyaa marka tafatiraha qadiimiga la xusho iyo marka adeegsadayaashu beddeli kari waayaan tafatireyaasha.
waxaa la hagaajiyay kale beddelida tafatireyaasha ee shaashadda Ku dar (qormo) Cusub ka hor inta aan la kaydin qormada qabyada ah.
Waxaa la hagaajiyay astaantii ku lifaaqnayd tafatirka URL-ka ee weydiinta var classic-editor.
waxaa la beddelay ogaanshaha WordPress 5.0 si aan loo adeegsanin jeegga meeriska. Waxay hagaajinaysa dhib marka la tijaabinayo 5.1-alfa.
Waxaa la bedelay qiimihii gabbaadka ahaa ee xulashada si loogu oggolaado adeegsadayaasha inay u beddelaan tafatireyaasha false.
Waxaa lagu daray curyaaminta kaabaha Gutenberg waxaana hoos loo dhigay meeriska WordPress ee loo baahan yahay illaa 4.9.
Lagu daray shaandho classic_editor_network_default_settings.
Waxaa la hagaajiyay cilad halkaas oo laga yaabo inay isku daydo inay ku rarto tafatiraha xayndaabka noocyada qormada ee aan taageerin tafatiraha marka adeegsadayaasha loo oggolaado inay beddelaan tafatireyaasha.
Waxaa loo beddelay dhammaan magacyadii/tixraacyadii “Gutenberg” “tafatiraha xayndaabka”.
Dib u hagaajiyay dejinta Wajahaadda Adeegsadaha UI.
Waxaa la saaray curyaaminta kaabaha Gutenberg. Tan waxaa loogu daray tijaabinta WordPress 4.9. Adeegsadayaasha doonaya inay sii wadaan raacitaanka horumarka Gutenberg ee WordPress 5.0 iyo wixii ka dambeeya uma baahnaan doonaan kaabe kale si ay u curyaamiyaan.
Waxaa lagu daray taageero loogu talagalay dejinta adeegsade kaste ee tafatiraha gabbaadka ah.
Waxaa lagu daray taageero loogu talagalay maamulayaasha si ay u dejiyaan tafatiraha gabbaadka ah ee barta.
Waxaa lagu daray taageero loogu talagalay maamulayaasha si ay ugu oggolaadaan adeegsadayaasha inay beddelaan tafatirehooda gabbaadka ah.
Waxaa lagu daray taageero loogu talagalay maamulayaasha shabakadda si looga hortago in maamulayaasha barta ay beddelaan dejinta gabbaadka ah.
Waxaa taageero lagu daray si loo kaydiyo tafatirihii ugu dambeeyay ee loo adeegsaday qorma kasta loona furo marka xigta.
Waxaa lagu daray “xaaladda tafatiraha qormada” liistada qormooyinka ee shaashadda qormooyinka. Wuxuu muujinayaa tafatiraha loo furi doono qormada. Waxaa la suurogelin marka adeegsadayaashu dooran karaan tafatiraha gabbaadka ah.
Waxaa lagu daray shaandhada classic_editor_enabled_editors_for_post iyo classic_editor_enabled_editors_for_post_type. Waxaa adeegsan kara kaabayaasha kale si loo xakameeyo ama loo tirtiro tafatiraha loo adeegsaday qormada gaarka ah oo nooc gaar ah.
Waxaa lagu daray shaandhada classic_editor_plugin_settings. Waxaa adeegsan kara kaabayaasha kale si ay u dhaafaan dejinta oo u curyaamiyaan dejinta UI-da.
Waxaa loo cusbooneysiiyay Gutenberg 4.1 iyo WordPress 5.0-beta1.
Waxaa la saaray waxqabadyada qaarkood oo hadda ka jira Gutenberg.
Waxaa la hagaajiyay dibu noqoshada khalad ah ee tafatiraha qadiimiga ka dib marka la eego dibu-eegista qormada.
Waxaa la hagaajiyay ka saarista wicitaanka “Isku day Gutenberg” marka kaabaha Gutenberg uusan shaqeynaynin.
Waxaa la hagaajiyay si had iyo jeer loo muujiyo dejinta iyo linkiga dejinta ee miiska liiska kaabayaasha.
La cusboonaysiiyay qoraalka i-akhri.
waxaa la cusbooneysiiyay ikhtiyaarka sanduuqa jeegga ilaa dhowr badhan oo raadiye, si uu umuuqdo mid cadcaddaan ah. Waad ku mahadsan @designsimply talooyinka summadda qoraalka ee uu soo jeediyay.
Qaar ka mid ah cusbooneysiinta iyo nadiifinta guud.
Waa loo cusbooneysiiyay Gutenberg 1.9.
Ka saarid digniinta iyo daminta si otomaatiga ah marka Gutenberg uusan firfircoonayn.
Arag dhammaan 68
5 xiddig 1,029
1 ee 20